उड्ने तयारीमा सुष्मा
नायिका सुष्मा कार्की फुर्सदिली भएकी निकै भइसकेको छ । आइटम गर्लको रुपमा उदाउने प्रयास असफल भएपछि अहिले उनी आक्कलझुक्कल म्युजिक भिडियोमा काम गरेर गुजारा चलाइरहेकी छन् । समय त कटाउनै प¥यो । यसको लागि सहयोगी बनेको ‘टिक–टक’ ।
उनी अहिले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा निकै ब्यस्त देखिन्छिन् । आशा होला, कतै टिकटक हेरेर कसैले अफर गरिहाल्लान कि ?
उनी इन्स्टाग्राममा फोटो टाँस्न पनि उत्तिकै सक्रिय छिन् । हालै उनले इन्स्टाग्राममा फोटो हालिन् र क्याप्शन लेखिन, ‘चरजस्तै अनुभुत गरेकी छु र उड्न लागिरहेकी छु ।’
फोटोमा भने उनी ढसमस्स बसेकी छन् । उनका फ्यानहरुले ‘कमसेकम उड्न लागिसकेपछि त त्यही अनुसारको पोज दिनु नि ?’ भन्दै सुझाव दिइरहेका छन् ।
हुन त उड्नै लागिसकेपछि नि के ठस्स परेर बसेको फोटो हाल्नु ? यसो हात फैलाइरहेको, हावामा कपाल हल्लिरहेको फोटो त राख्नु नि !
यो जानकारी आजको ‘शुक्रबार’ दैनिकबाट ।